Masaajidka ay soomaalidu maamusho ee Göteborg oo albaabada la iskugu dhiftay | Somaliska
Qilaaf muddo dheer soo taagnaa oo u dhaxeeyey kooxo in dhawaalaba ku hardameeyey cidda gacanta ku heeyneysa masaajidka ay sida gaarka ah maamulkiisa u heeso soomaalida ku nool xaafadda Biskopsgården ee degmadda Hisingen ee Göteborg ayaa ugu dambeeyntii albaabada la iskugu dhiftay, ka dib markii kooxihii qilaafka u dhaxeeyey uu halkaas ku dhex maray buuq iyo is qab qabsi.
Habeenimaddii xalay ayaa koox ka mid ah kooxihii isku heeystay halkaasi doonayeen ineey adeegsadaan gudaha masjidka kuwaas oo ku doodayey ineey iyagu xaq u leeyihiin adeegsigeeda. Arrintan oo ay u cun tami weeyday dhinicii kale, ayaa dhalisay buuq iyo is qab qabsi keenay in boolisku soo gaaro goobta halkaana ku kala kaxeeyey kooxhii faraha isku taagayey.
Qilaafka u dhaxeeya labadda kooxood ee soomaalida ah ayaa salka ku haya cidda maamuleeysa masaajida, ahaatee muddo sanad ka hor ayaa koox ka mid ah kooxaha halkaasi isku haya waxaa ay dacwad ka gudbiyeen kooxda kale oo ay ku eedeeyeen in imaamka ka been abuurtay kulankoodii sanad laha ahaa islamarkaasina adeegsaday magacyo been abuur ah. Wixii intaasi ka dambeeyeyna waxaa maamulka gobolka Göteborg gebi ahaanba ka joojiyey deeqdii uu siin jiray maamulka masaajidka.
Qilaafka labadan kooxood ayaan ka marneyn caadifad qabiil oo qeyb ka ah dagaalka u dhaxeeya. Taasina waxaa ay keentay i qoloba qolado kale ku eedeeyso ineey yihiin asal raac iyo kooxo islaamiyiin ah oo doonaya ineey faro maroojiso maamulka iyo awooda masjidka. Dhinaca kale maamulka degmadda Västra Hisingen ayaa ka wel welsan is qab qabsiga u dhaxeeya kooxaha soomaalida oo walaac ku soo koriyey xaafadda oo awal la daala dhaceeysay falalka kooxaha falal dambiyeedyada geeysta.
Maamulka degmadda ayaa ku baaqay in la qabto kulan deg deg si xal looga gaaro kooxahan isku heeysta masjidka. Waxeey sidoo kale maamulka walbahaar ka muujiyeen is qab qabsiga u dhaxeeya labadda dhinac oo saameeyn ku yeelan kara amaanka xaafadda oo awal ulo booc ah ku tukubayey.
Ugu dambeyntiina lama oga sida uu ku dambeeyn doono xaalka masaajidka xaafadda Biskopsgården oo muddo dheer uu ka taagnaa qilaaf wejiyo badan leh oo u dhaxeeya soomaalida maamusha. Waxaana la dhowrayaa kulanka ay iskugu iman doonaan maaulka gobolka iyo kooxahaas labbo toddobaad ka dib. Hadase ma muuqato xal ay keenaan kooxaha is heeysta. Qilaafkooduna ka sokow in uu gaaray saxaafadda iyo maamulka degmadda waxaa uu saameeyn ku yeeshay adeegyadii kale ee masaajidku qaban jiray sida salaada iyo quraanka oo carruuraha lugu bari jiray kuwaas oo dhamaantood uu hadda dib u dhac ku yimid.
Waa wax niyad jab nagu ah inaa maqalno Somali Maajid isku heeysata wili iyago qabyaaladeenaya.
Hadane meesha tahay wadan qaxooti lagu yahay oo caruurteenii ku dayacantahay.
Kuwaas Somali iyo muslimba we ceebeeyeen Alle umada haka qabto, waxee isku heeysaan kama badno qarash yar oo degmada ku caawiso.
Maashalah tabaaraka laah misaajidka waa la furey 12 saac ka dib waa ilaah mahadiisa cadawga soomaalia iyo muslimiinta alah ha qabto